0.1 "Хей Джери, ахоана не ahafahako manao bolongana играчка ny anao?"
0.2 Raha mikaroka ‘manao fitoraham-bola amin’ny banky’ ao amin’ny Google ianao, iray amin’ireo valim-pikarohana soso-kevitra atolotr’i Google dia "azonao atao tsara ny mitoraka blaogy". Mampiseho izany fa misy mpikaroka maro tsy ahitam-bokatsoa izay tsy mahalala hoe firy no azonao atao amin’ny bolongana – satria ny soso-kevitr’i Google dia mifototra amin’ny habetsaky ny fehezanteny fototra. Ka ohatrinona no azonao amin’ny alàlan’ny fanaovana bilaogy? Mba hamaliana ny fanontaniana, andao hojerentsika ny Internet. Lindsay sy Bjork avy ao Pinch of Yum dia nanao $ 85 000 mihoatra ny $ 2016 tamin’ny vola miditra (nijanona tsy nizara tarehimarika marina izy ireo taorian’izay). Pat Flynn avy amin’ny Smart Pasive Income за $ 160 000 $ tamin’ny Desambra 2017. Matthew Woodward dia nanao $ 25 000 mihoatra ny $ 2017 tamin’ny volana Desambra. Ny karazana fidiram-bola azoko avy amin’ireto tatitra momba ny fidiram-bola ireto dia: Азо атао изани! Ny mpitoraka blaogy dia manao vola amin’ny Internet, ary Amin’ny hevitra sy paikady mety, tsy misy fetrany ara-bakiteny ny habetsahanao azonao atao ao anaty aterineto. Ity dia mitondra всички amin’ny fanontaniana manaraka … Ahoana no ahazoan’ny mpamaham-bolongana vola? Misy fomba tsy misy fiafaràna mba hahazoana vola avy amin’ny blôginao. Банерна реклама. Съдружници mivarotra. Mamorona sy mivarotra ny vokatrao manokana. Фамеренана фанацарана. Inona no safidy tsara indrindra? Arakaraky ny maha-indostrianao anao sy ny toerana misy ny blôginao dia hisy fomba tsara kokoa handraisana ny blôginao. Gael Breton avy amin’ny Authority Hacker dia nanadihady ny fomba fitadiavan’ireo bilaogera 23 amin’ny famahanam-bolongana ary namintina izany Ny fivarotana ny vokatrao manokana dia, amin’ny ankapobeny, tena mahasoa indrindra (jereo ny tay tay tay). Бизнес моделТотална вола miditraFandaniana tanterakaProfitProfit Марж Услуги $ 21 508 $ 2805 $ 18 703 шестстотин шестдесет и шест процента Продажба на реклама $ 235 977 135 долара, 041 100 долара, 936 74% Партньорски маркетинг $ 214 232 $ 47 664 $ 166 568 349 процента Ny vokatra mivarotra $ 434 004 $ 113 767 $ 320 237 281% Ny saram-pitsaboana matetika dia sarotra ny mivarotra ary noho izany dia miteraka latsaky ny fidiram-bola ny tombony azo antoka. Maro amin’ireo mpitoraka blaogy amony no manao bilaogy mivantana sy mivarotra. Ny varotra an-tserasera dia mamokatra vola be (2-ри най-добър), fa noho ny mpivarotra adiresy hamokatra votoaty marobe ary indraindray mahazo ny fiveamoivoizana, dia mihena haingana ny marika. Принадлежност ара-баротра не tena tetikasam-pihariana mahomby indrindra, izay mahatonga azy ho tsara ho an’ny mpamaham-bolongana vaovao izay mila manangom-bola haingana. Ity tranonkala ity dia natotokana ho an’ny fidiram-bola avy amin’ny fiarahamonim-pirenena – ary nahavita nitombo avy amin’ny bilaogy iray-olona iray izahay ho an’ny ekipan’ny tonian-dahatsoratra iray, bilaogera mavitrika iray, aryy mpivarotra media sosialy roa. Ny fivarotana vokatra ho an’ny vokatra dia mamokatra ny vola miditra indrindra amin’ny marika tombontsoa lehibe. Ny marika dia kely ambany noho ny fivarotana tokotany noho ny vidiny mifandraika amin’ny serivisy mpanjifa, ny fanodinana fandoavam-bola, sns., Fa ny tahan’ny fivoarana Avo lenta dia manome izany ho an’ny # 1 loharanom-bola azo antoka ho an’ny mpitoraka blaogy. Hanomboka Raha mamaky mandra-pahatongan’ity dia mbola tsy manana bilaogy ianao… dia tsy maintsy misitrika loha ianao izao. Fa maninona no tsy nanomboka teo aloha ianao? Eny ary, mbola tsy tara raha nitsambikina tao. Ity ny ahy dingana iray amin’ny dingana vita amin’ny fomba hamoronana blaogy eto. Vakio ity ary aloha ary miverena amin’ity torolalana manaraka ity. Хиандри ахо! Добре! Koa ankehitriny dia vonona ny blôginao ary isika rehetra dia napetraka ho an’ny volamena … Ahoana no ahafahanao manao bilaogy vola, ho an’ny tena?
0.3 Tandindomin-doza + fandrindrana taranja = vola
1 Томбанана цара
2 Ahoana no ahitanao milina mahasoa?
2.1 Fomba # 1: Manaraha ny vola
2.5 Fomba # 2: Facebook
2.5.1 Ampiasao ny pejin’ny Facebook sy ny vondrona Facebook hahatakatra ny fananananao fananananao
2.5.2 Ampiasao ny soso-kevitra Facebook mba hitadiavana mpifaninana
2.6 Fomba # 3: Fikarohana fikarohana teny amin’ny sekoly fanabeazana taloha
2.7 Inona не misimisy kokoa amin’ny данни данни?
2.8 Ampiasao ny fikarohana teny fototra mba handinihina ny laharana iray: Fihetsehana fohy
2.9 Фанапахан-кевитра: Vitsy kely na lehibe?
3 Насочен трафик
3.1 Ny fomba mahomby indrindra hampiroboroboana ny blôginao
3.2 1. Публикуване на гости
3.3 3. Adiresy Facebook
3.4 Fanomezana # 2: Mampirisika ny vokatra avy amin’ny orinasa amin’ny sehatra samihafa
3.5 Идея № 3: Маномана бирао ирай
4 TL; DR / Mandrosoa
4.1 Мака Действие!
"Хей Джери, ахоана не ahafahako manao bolongana играчка ny anao?"
Amin’izao fotoana izao aho dia mahazo ny fanontaniana "mametraka vola an-tserasera" amin’ny namana sy ny fianakaviana.
Ny sasany maniry manomboka blôgy ary manao fidiram-bola kely amin’ny aterineto. Ny hafa, handositra ny fitohanan’ny fiara miasa, na hanitatra ny orinasa an-tserasera, na hiala amin’ny asa 9-to-5, sns.
Tena maniry ny hanampy ireo izay fantatro aho. Saingy, izaho dia afaka mizara betsaka toy izany na mandritra ny fivoriana ataon’ny olona na Whatsapp във Facebook Messenger.
Noho izany, manoratra ity lahatsoratra ity aho mba hizara lesona nianarako ho играчка ny mpamaham-bolongana nandritra ny taona 15 farany.
Raha mikaroka ‘manao fitoraham-bola amin’ny banky’ ao amin’ny Google ianao, iray amin’ireo valim-pikarohana soso-kevitra atolotr’i Google dia "azonao atao tsara ny mitoraka blaogy".
Mampiseho izany fa misy mpikaroka maro tsy ahitam-bokatsoa izay tsy mahalala hoe firy no azonao atao amin’ny bolongana – satria ny soso-kevitr’i Google dia mifototra amin’ny habetsaky ny fehezanteny fototra.
Ka ohatrinona no azonao amin’ny alàlan’ny fanaovana bilaogy? Mba hamaliana ny fanontaniana, andao hojerentsika ny Internet.
Lindsay sy Bjork avy ao Pinch of Yum dia nanao $ 85 000 mihoatra ny $ 2016 tamin’ny vola miditra (nijanona tsy nizara tarehimarika marina izy ireo taorian’izay).
Pat Flynn avy amin’ny Smart Pasive Income за $ 160 000 $ tamin’ny Desambra 2017.
Matthew Woodward dia nanao $ 25 000 mihoatra ny $ 2017 tamin’ny volana Desambra.
Ny karazana fidiram-bola azoko avy amin’ireto tatitra momba ny fidiram-bola ireto dia:
Азо атао изани! Ny mpitoraka blaogy dia manao vola amin’ny Internet, ary
Amin’ny hevitra sy paikady mety, tsy misy fetrany ara-bakiteny ny habetsahanao azonao atao ao anaty aterineto.
Ity dia mitondra всички amin’ny fanontaniana manaraka …
Ahoana no ahazoan’ny mpamaham-bolongana vola?
Misy fomba tsy misy fiafaràna mba hahazoana vola avy amin’ny blôginao.
Банерна реклама. Съдружници mivarotra. Mamorona sy mivarotra ny vokatrao manokana. Фамеренана фанацарана.
Inona no safidy tsara indrindra?
Arakaraky ny maha-indostrianao anao sy ny toerana misy ny blôginao dia hisy fomba tsara kokoa handraisana ny blôginao.
Gael Breton avy amin’ny Authority Hacker dia nanadihady ny fomba fitadiavan’ireo bilaogera 23 amin’ny famahanam-bolongana ary namintina izany Ny fivarotana ny vokatrao manokana dia, amin’ny ankapobeny, tena mahasoa indrindra (jereo ny tay tay tay).
Бизнес моделТотална вола miditraFandaniana tanterakaProfitProfit Марж
Услуги $ 21 508 $ 2805 $ 18 703 шестстотин шестдесет и шест процента
Продажба на реклама $ 235 977 135 долара, 041 100 долара, 936 74%
Партньорски маркетинг $ 214 232 $ 47 664 $ 166 568 349 процента
Ny vokatra mivarotra $ 434 004 $ 113 767 $ 320 237 281%
Ny saram-pitsaboana matetika dia sarotra ny mivarotra ary noho izany dia miteraka latsaky ny fidiram-bola ny tombony azo antoka. Maro amin’ireo mpitoraka blaogy amony no manao bilaogy mivantana sy mivarotra.
Ny varotra an-tserasera dia mamokatra vola be (2-ри най-добър), fa noho ny mpivarotra adiresy hamokatra votoaty marobe ary indraindray mahazo ny fiveamoivoizana, dia mihena haingana ny marika.
Принадлежност ара-баротра не tena tetikasam-pihariana mahomby indrindra, izay mahatonga azy ho tsara ho an’ny mpamaham-bolongana vaovao izay mila manangom-bola haingana. Ity tranonkala ity dia natotokana ho an’ny fidiram-bola avy amin’ny fiarahamonim-pirenena – ary nahavita nitombo avy amin’ny bilaogy iray-olona iray izahay ho an’ny ekipan’ny tonian-dahatsoratra iray, bilaogera mavitrika iray, aryy mpivarotra media sosialy roa.
Ny fivarotana vokatra ho an’ny vokatra dia mamokatra ny vola miditra indrindra amin’ny marika tombontsoa lehibe. Ny marika dia kely ambany noho ny fivarotana tokotany noho ny vidiny mifandraika amin’ny serivisy mpanjifa, ny fanodinana fandoavam-bola, sns., Fa ny tahan’ny fivoarana Avo lenta dia manome izany ho an’ny # 1 loharanom-bola azo antoka ho an’ny mpitoraka blaogy.
Raha mamaky mandra-pahatongan’ity dia mbola tsy manana bilaogy ianao… dia tsy maintsy misitrika loha ianao izao.
Fa maninona no tsy nanomboka teo aloha ianao?
Eny ary, mbola tsy tara raha nitsambikina tao.
Ity ny ahy dingana iray amin’ny dingana vita amin’ny fomba hamoronana blaogy eto. Vakio ity ary aloha ary miverena amin’ity torolalana manaraka ity.
Добре! Koa ankehitriny dia vonona ny blôginao ary isika rehetra dia napetraka ho an’ny volamena …
Ahoana no ahafahanao manao bilaogy vola, ho an’ny tena?
Ny sasany milaza fa ny votoaty dia mpanjaka.
"Manaova ny voatatiny tsara; ny vola sy ny fiveamoivoizana dia hanaraka, "hoy ilay manam-pahaizana.
Tsy tena marina izany – farafaharatsiny ty avy amin’ny zava-niainako.
Ny votoatiny dia 50% fotsiny ny lalao, raha kely indrindra.
Ени, amin’ny maha mpamaham-bolongana azy, adidinay ny mamorona votoaty mba hitazonana ireo mpamaky anay.
Fa mba hahazoana vola amin’ny farany, tokony hanana singa manan-danja roa hafa ianao – tondra-drivotra azo antoka sy tratran’ny tranonkala.
Tandindomin-doza + fandrindrana taranja = vola
Raha tsy misy ny iray amin’ireo singa ireo dia tsy hamoaka vola be avy amin’ny blôginao ianao.
Hijery ny tsirairay amin’ireo singa manan-danja ireo isika izao.
Ity misy tantara iray nozaraiko iray amin’ireo lahatsoratro ao amin’ny ProBlogger.net teo aloha –
Raha vao nanomboka ny asako tamin’ny maha-mpivarotra Internet ahy aho, dia nanao tranokalam-pikambanana iray aho mba hivarotra sambo marefo. Azonareo an-tsaina ve hoe firy ny olona mividy sambo marefo aty anaty aterineto?
Ny ratsy indrindra, it vokatra ity dia vokatra ara-tsakafo ary mivarotra ihany mandritra ny fahavaratra, noho izany dia mbola voafetra ihany aho tamin’ny fivarotako. Ny habaka dia tsy mihoatra ny varotra roa isan-taona. Tsy voatery ny fotoanako hanorenana an’io tranonkala io.
Ny lesona amin’ity: Na inona na inona ny fanoratana tsara ny votoatinao na ny hatsaranao ny endrikao ny bilaoginao – raha tsy manapa-tsakafo mahasoa anao ianao, dia tsy ho afaka hampiova ny ezaka vitanao amin’ny.
Ahoana no ahitanao milina mahasoa?
Misy karazana fomba maro hitadiavana alika mahasoa ao amin’ny Internet. Hizara fomba telo izay tena tsara ho ahy aho.
Fomba # 1: Manaraha ny vola
Nahoana no mitranga any amin’ny banky ny tranga играчка izany? Satria izany no vola.
Mitovy amin’izany ihany koa ny fikarakarana ny filàn’ny orinasa. Mikatsaka fotsiny ny orinasa izay mandany vola amin’ny sambo mpizarazara. Tena fahatsaram-piainana ara-barotra. Tsy hampiasa vola be ireo mpizahatany raha tsy hoe averin’ny ROI tsara ny dokam-barotra.
Ireto misy fitaovana vitsivitsy azonao ampiasaina mba hahafantarana raha mandany vola ny mpizarazara (ary ny tena zava-dehibe, ny vola lany).
Manaova fikarohana mifandraika amin’ny nichanao Google или Bing. Misy dokam-barotra ve ao amin’ny pejin’ny valin’ny fikarohana?
Amin’ny ankapobeny – raha misy dokambarotra maherin’ny telo mifaninana amin’ny fehezanteny fototra iray – dia misy vola azo atao ao amin’io faritra io.
Охатра: Ny valin’ny fikarohana ao Bing amin’ny floristan’i Londres.
Охатра: Valin’ny fikarohana Google ho an’ny latabatra kesika hazo.
Azonao ampiasaina avy eo Google Planet Keyword Planner Manoritsoritra ny vidin’ny sainam-pirinty ho an’io fikarohana io ary maminavina moe ohatrinona no azonao atao amin’ny Google Adsense click *; ary noho izany, ohatrinona no azonao atao amin’ny fivarotana habaka adiresy.
Mariho fa tsy misy fitsipika mazava an-tsoratra fa fanombantombanana be loatra, Google dia mandoa ny 30 – 50% ny vidin’ny klikan’ny Adsense Publishers.
Fomba iray hafa hamaritana hoe ohatrinona (ary ny tena zava-dehibe indrindra, raha) mandany ny dokam-barotra pay-per-click (PPC) Ny doka dia amin’ny SpyFu.
Spyfu, GoogSpy tany am-boalohany, dia fitaovana fikarohana momba ny fikarohana izay mampiseho ny teny fanalahidin’ny mpividy ao amin’ny Google Adwords. Mampiasa azy aho isaky ny mila mitady fikarohana lalina.
Ny sary eto ambany dia ohatra sasantsasany izay hitako tamin’ny Spyfu Безплатно търсене. Ny tsirairay amin’ireo fikarohana ireo dia latsaka kely noho ny minitra 5 mba hamitana azy – ary azoko fantarina ny tombom-barotry ny niche amin’ny fandinihana ireo antontan-taratasy ireo. Misy tsipirian-javatra sarobidy kokoa raha toa ka mihoatra ny fikarohana malalaka isika saingy hifikitra amin’ny famoahana maimaim-poana amin’izao fotoana izao. Mba hanaovana ny fikarohana ataonao dia tsindrio fotsiny amin’ny mpifaninana anao (na ireo mpilalao lehibe ao amin’ny sainanao) amin’ny fikarohana.
Ny tena fiainana marina # 1 – 64 000 долара / месец amin’ny Adwords
Ниша №1 – vokatra malefaka, vahaolana raharahambarotra. Misy mihoatra ny orinasa hafa an’ny 10 izay manolotra fandaharam-pikambanana ao amin’ity orinasa ity. Spyfu nanombantombana fa ity mpivarotra ity dia mandany $ 64 000 amin’ny Adwords isam-bolana.
Ниша №2 – 100 000 долара за месец amin’ny Adwords
Ниша №2 – Fanatanjahantena ara-panatanjahantena – mieritrereta marika ara-panatanjahantena играчка ny Adidas, Nike, ary New Balance, fa amin’ny kely kokoa ary mifantoka amin’ny karazana fanatanjahantena. Ity orinasa ity dia mandany mihoatra ny $ 100 000 isam-bolana amin’ny tenifototra maherin’ny 57,000 araka ny Spyfu.
Ниша № 3 – $ 60 000 / месечно adin’ny Adwords
Ny Niche # 3 – mpamatsy solosaina IT – tsena iraisam-pirenena, ny ankamaroan’ny olona izay mitaky tranonkala dia mila izany. Misy 10 – 15 mpilalao lehibe hafa amin’ity sehatra ity. Ity orinasam-pandraharahana ity dia manolotra ny tenimiafina 3,846 ao amin’ny Google ary mandany ny $ 60,000 isam-bolana.
Ниша №4 – $ 9 500 / месец amin’ny Adwords
Ниша №4 – Mpanome tolotra tranonkala. Ity orinasa ity dia iray amin’ireo fanombohana mahazatra vitsivitsy taona vitsy lasa izay. (Gaga aho mahita azy ireo mandany efa ho $ 10,000 isam-bolana amin’ny adwords).
Ниша №5 – $ 71 500 / месец amin’ny Adwords
Ниша № 5 – Вокатра ара-бола манертания. Ny sary nalaina dia ny fanadihadiana iray amin’ny iray amin’ireo mpilalao lehibe indrindra amin’ity sambo ity. Nanana tranonkala roa tao amin’ity orinasa ity aho niverina tao amin’ny 2000 – tsy ho gaga raha mahita orinasa mandany mihoatra ny $ 100 000 isam-bolana amin’ny adwords.
Ниша 6 – $ 24 200 / месец amin’ny Adwords
Ниша № 6 – Mpanome tolotra tranonkala. Ity tranonkala ity dia tranonkala iray ary tsy mivarotra ny vokany manokana. Ny tompon’ny tranokala dia mandany vola mihoatra ny $ 20 000 isam-bolana amin’ny dokambarotra PPC.
Fomba iray hafa ampiasaiko matetika mba hitsaràna ny tombotsoan’ny niche iray dia mijery ireo isa ao Commission Junction (CJ).
Midira ao amin’ny CJ.com ary tadiavo ny mpivarotra ao amin’ny tohatra nianatra.
Misy mpandraharaha manan-danja ve?
Moa ve ireny mpivarotra ireny manolotra asa tsara?
Moa ve ireny mpivarotra ireny mandoa ny vondrona misy azy?
Azonao ampiasaina ny vola harenina (barazy maitso) ho играчка ny mety ho endriky ny karama.
Jereo ny sary etsy ambany mba hahatakarana ny fomba handikako ny isa ao amin’ny CJ.
Fandanian’ny tambajotra = Manao ahoana ny habetsahan’ny mpividy raha oharina amin’ny ankapobeny. Hahazoana harena ambony kokoa = fidiram-bola bebe kokoa amin’ny programa; Volan’ny 3 EPC = salanisa isaky ny klioba 100 = Ny tombony azo antoka dia ity programa afiliana ity amin’ny fotoana maharitra; 7 andro EPC = salanisa isaky ny klioba 100 = ity vokatra ity?
Fomba # 2: Facebook
Afaka manao zavatra be lavitra noho ny fizarana sary ianao ary mandefa ny fanavaozana ny status ao amin’ny Facebook.
Ny haino aman-jery sosialy lehibe indrindra eran’izao tontolo izao dia tena fitaovana lehibe hahafahanao manazava ny vaika vaovao azonao. Fantaro bebe kokoa momba ny mpihaino kendrena anao, ampio ny mpifaninana aminao, tadiavo ny zoro iray hamehezana ny niche anao, sy ny sisa.
Hampiseho ireo asa ireo aho amin’ny fampiasana ohatra.
Ampiasao ny pejin’ny Facebook sy ny vondrona Facebook hahatakatra ny fananananao fananananao
Raha efa manana ianao Facebook Page (afaka mamorona iray ianao alohan’ny hanombohana blôgy, afaka maimaim-poana), ny toerana voalohany hijerena ny fanorenanao. Alefaso any amin’ny sasany amin’ireo fanatanjahan’ireo mpankafy ireo ary tandremo ny demografika (lahy / vavy, toerana, manambady / tokana / nisara-panambadiana, taona, sns) ary ny tombontsoany.
Mifandraisa am-piangonana Facebook group – vakio ny resadresaky ny mpampiasa mba hahatakatra ny olana sy ny filany.
Ampiasao ny soso-kevitra Facebook mba hitadiavana mpifaninana
Ho an’ireo izay manana pejy Facebook dia mandehana ao amin’ny Insights> Преглед> Pejy ho Watch. Ity no hitanao ary ampitahao ireo pejy mitovy soso-kevitry Facebook. Azonao atao tsindriana amin’ny rohy tsirairay mba hahitanao ireo lahatsoratra malaza levelaka tao amin’ireo pejy ireo.
Pejy tokony jerena – araka ny soso-kevitry ny Facebook ao amin’ny iray amin’ireo pejy izay tantanako.
Ahoana ny fampiasana intel Facebook
Misy zavatra maro azonao atao miaraka amin’ny lisitr’ireo mpifaninana sy ny antsipirian’ny mpankafy izay anananao.
Ireto misy soso-kevitra sasantsasany:
Mpikatroka lehibe ao amin’ny Facebook amin’ny Facebook ary mianatra ny paikady momba ny varotra.
Fantaro ireo lohahevitra malaza ao amin’ny fonosanao – Inona ny hype farany ao an-tanàna? Afaka mahita angom-baovao ho an’ny blôginao ve ianao amin’ny fijerena ireo fironana ireo?
Hamafiso amin’ny lahasa iray vaovao amin’ny fijerena ireo hetsika mpilalao hafa – Izany no nahitako ny karazan-tsindrim-borona rehefa nandalina ny bilaogy CSS / jQuery / HTML5 aho.
Fantaro ny mpihaino anao – Aiza izy ireo no mandany fotoana? Inona ny olana mahazo azy ireo? Afaka manome vahaolana ve ianao?
Jereo hoe nahoana ny olona no mividy amin’ny mpifaninana aminao – Afaka manome zavatra mitovy ve ianao ary manangom-bola?
Jereo hoe nahoana ny olona no tsy mividy amin’ny mpifaninana aminao – Manahirana loatra ve ny vokatrao? Angamba tsy manakarama izany marina izany. Afaka manao zavatra tsara kokoa ve ianao ary mahazo ny mpitsidika azy?
Manorata lohateny lehibe sy votoatim-baovao – Fantaro hoe iza amin’ireo lahatsoratra ao amin’ny Facebook no mahazo ny fidirana ambony indrindra, manorata lohateny играчка izao.
Fomba # 3: Fikarohana fikarohana teny amin’ny sekoly fanabeazana taloha
Azoko antoka fa efa nandre momba ny fikarohana teny fikarohana ianao amin’izao fotoana izao.
Na miandry … ty izany ianao? Eny ary, tsi manenjika soavaly maty intsony aho Ity misy lisitra tsara ho an’ny mpandray anjara.
Nahoana no fikarohana momba ny sokajy?
Ny lavaka lava vava amin’ny teny malemy (кредит: Alefaso any amin’ny Fox).
Ny fikarohan’ny sokajy dia matetika atao any am-piandohan’ny fanentanana SEO. Ny tanjon’izy ireo, matetika kokoa noho ny tsy, dia ny mamantatra matetika ny teny fanalahidy notadiavina (ho fohy na lava lava) ary mametraka lalana ho an’ny fanentanana.
Inona не misimisy kokoa amin’ny данни данни?
Saingy satria fantatry ny ankamaroan’ny mpividy mpividy – betsaka kokoa ny mampiasa io tahirin-teny fototra io. Miaraka amin’ny votoatin-teny manan-danja dia azontsika atao ihany koa ny mahatakatra ity manaraka ity kokoa (ary mety ho hita koa ny fahafaha-manao fandraharahana vaovao):
Fikarohana bebe kokoa = fangatahana amony; Valiny misimisy kokoa no niverina tao amin’ny pejy valin’ny fikarohana = fanampiny.
Marika sy anarana manokana
Охатра: Ho an’ny fakantsary – Nikon, Canon, Sony; ho an’ny mariazy – Бали, Малдиви, Хаваи; ho an’ny tranonkala – iPage, BlueHost, Hostgator; ho an’ny olo-malaza – Тейлър Суифт, Парк Линкин, Бруно Марс.
Ny fikasan’ny mpikaroka
Amin’ny ankapobeny, ny fividianana mividy dia avo kokoa raha be ny karoka momba ny ‘famerenan’ny Widget’, ‘ny sarisary modely ary ny anarana’, ’10 най-добрата марка джаджи ‘,’ mividy widget online ‘. Mifanohitra amin’izany, ny fikarohana momba ny ‘tantaram-pifandraisana’, ‘fitarainana widget’, na ‘ny fanaovana Widget’ dia mety hiova ho fifanakalozana ara-barotra.
Ny dokam-barotra mendrika kokoa amin’ny fikarohana fikarohana manokana, ny sandam-barotra amony kokoa dia ho an’io fikarohana io.
Ampiasao ny fikarohana teny fototra mba handinihina ny laharana iray: Fihetsehana fohy
Tamin’ny fotoana voalohany nanombohako, maro ireo webmasters (mariho – dia mbola niankina tamin’ny fitaovana iray antsoina moe "увертюра") – izay ahafahanao mametraka fomba fikarohana tsotra fotsiny ny ‘mpitoraka blaogy’ ary ny rafitra dia hanome endrika sarotra anao indraindray io teny io dia mikaroka, maimaim-poana. Aminay dia ampitahao ireo isa ireo miaraka amin’ny habetsaky ny valim-pifidianana ary hitsara ny fiveaninanana (ary ny rentability) amin’ny niche.
Ankehitriny fa tsy misy intsony ny Overture dia sarotra ny mahazo ny angon-teny maimaimpoana azo antoka.
Ny Google Планировчик на ключови думи и i amin’ireo fitaovana maotina vitsivitsy ampiasaiko amin’izao fotoana izao (raha azonao atao ny mandoa vola, manoro hevitra AHREFS ary Aza maimaika).
Amin’ireto sary manaraka ireto dia hasehoko ny fomba ampiasako an’ireny fitaovana ireny mba handinihina ny atody sy handika ny angona azo. Ity dingana ity dia mety haka fotoana fohy (latsaky ny 30 minitra) na mety haka fotoana hamaranana izany. Miankina amin’ny halehibeny ny lisitry ny sokajy misy anao ary ny halalin’ny fitiavanao hanaraka ny tontolon’ny orinasa.
Ny sarimihetsika filma dia iray amin’ireo zanako indrindra. Tsy manangona azy ireo aho fa mankasitraka ny hatsaran’ny zavakanto sy ny fahatsiarovan-tena ao amin’izy ireo. Andeha hojerentsika raha afaka mampitodika ny fahalianako amin’ny hevitra bilaogy mahasoa izahay. Mariho fa tsy nanao fikarohana aho talohan’ny nanoratako ity torolàlana ity – ka dia mahaliana ahy играчка ny amin’izao fotoana izao.
Алефасо алоха ny Google Тенденции.
Raha смеси ny endrika, dia toa tsy mandeha amin’ny Internet intsony ny lohahevitra – izay tena lojika raha jerena ny fotoana lanin’ny olona ao amin’ny YouTube androany.
Rehefa mivoatra dia afaka mahita koa izahay fa ny ankamaroan’ny mpikaroka dia any Etazonia, Kenya, Inde, Aostralia, ary Kanada.
Mba hahatakarako tsara kokoa ny tabilao, matetika aho dia mampitaha ny fironana tsy fantatra amin’ny zavatra fantatro. Amin’ity ohatra ity dia nampidiriko ny teny moe "фанамарина хостинг". Hitanao fa misy olona maro kokoa mitady "afisy саримихецика".
Планировчик на ключови думи в Google Planet
Avy eo, handeha ho any amin’ny Google Keyword Planer izahay mba hahazo hevitra bebe kokoa.
Циндрио ао amin’ny "sarimihetsika" amin’ny sarimihetsika ary tsindrio "Вземете идея".
Ny pejy voalohan’ny pejy (jereo eto ambany) dia mampiseho fa maro ireo karazana fikarohana amin’ny sarimihetsiketsa momba ny sarimihetsika (fandaharana 41,900 + isam-bolana), horonantsary sarimihetsika horonantsary (5,600s + isamin-hoimihearnana (5,600s + himih-hoimihearnanana (5,600s) саримихецика саримихецика, саримихецика малаза (3400 + хоронантска фикарохана), холивудска афиси саримихецика (Фикарохана 1600 + исам-болана), си ню сиса. Misy ihany koa ny fangatahana Avo lenta kokoa momba ny famoronana ny sariimihetsika fimailo (~ 22 000 фикарохана).
Endri-tsoratra manan-danja amin’ny Key Planner на Google Maps.
Mba handehanana lalindalina kokoa dia azontsika atao ny manindry ny tenimiafina amin’ny antsipiriany bebe kokoa. Ity no ahafahantsika mahatakatra kokoa ny fikasan’ny mpikaroka. Tandremo ny karazana fampahalalana hitan’ny mpikaroka.
Azontsika atao ve ny manamarika ny fividianana fikolokoloana amin’ireto karoka ireto (raha mivarotra mivantana ny sariimihetsika mivantana ny drafitra)? Azonao atao ihany koa ny lohahevitra ifanakalozan-kevitra.
Fehezanteny manan-danja ahitana ny "Направете филмов плакат" – ireo mpikaroka ireo no tena mitady ny lesona sy fitaovana fanontam-pirinty.
Mba hahalalantsika bebe kokoa ny lohahevitsika dia andao isika handefa hevitra misimisy kokoa ho an’ny teny Ubersuggest.
Angamba ny sarimihetsika sarimihetsika piozila dia hevitra tsara an-tserasera?
Миверина всякаква amin’ny Google Търсене
Ahoana raha tsy te hivarotra vokatra ara-batana isika? Fantatrao – ци диа махафинаритра лоатра ny fanodinana sy ny логистика. Afaka miblaogy sy mivarotra sehatra dokam-barotra fotsiny ve isika? Mba hamaliana ity fanontaniana ity dia andramo ny fikarohana sasantsasany ao amin’ny Google ary hijerena raha afaka mahita ny mpizarazara na ny programa afiliana isika.
Azonao atao ihany koa ny mijery akaiky ny dokam-barotra amin’ny dokam-barotra amin’ny dokambarotra – moa ve izy ireo mamorona dokam-barotra eny an-dalam-pikarohana? Раха еня, инона нилаоги? Afaka mivarotra mivantana mivantana amin’ireo mpivarotra ve ianao? Manome toky ny tombombaran’ity lohahevitra ity, dia afaka mampihatra ity data ity fanalahidy ity amin’ny Spyfu izahay mba hamaritana hoe firy ny mpizarazara no mandany.
Mba handinihana lalindalina kokoa, mety te-hibitsika amin’ny valin’ny fikarohana biolojika isika (tranokalan’ny rohy, ny fanatsaràna ny onjam-peo, ny haino aman-jery sosialy, sns.) Mba hahitana ny fahasarotam. Fiveaninanana momba ny SEO.
Фанапахан-кевитра: Vitsy kely na lehibe?
Ny fiveaninanana SEO
Ankehitriny dia manana ny tsenan’ny tsena rehetra ilaina isika – fotoana hanapahan-kevitra. Tokony hitsambikina ve isika? Tena tsara tokoa ve izany? Inona no mety ho fiantraikany amin’ny fanatonana izany? Хавелако хо анао, фанатоахан-кевитра.
Zavatra iray, na izany aza, maniry ny hamoaka mazava aho alohan’ny hamaranana ity fizarana ity – dia ny momba ny fanapahan-kevitrao amin’ny niche.
Maro amin’ireo manam-pahaizana no manoro hevitra vaovao mba hisorohana ny Fiveaninanana SEO tsy hivezivezy ary hisafidy karazan-tarimihetsika kely kokoa rehefa misafidy ny niche.
"Manana trondro lehibe ao anaty dobo kely", hoy izy ireo.
Mino ny mifanohitra amin’izany aho. Tokony hanandrana ny dobo goavana ianao (teny filamatra eo amin’ny fikarohana miaraka amin’ny fangatahana Avo lenta sy ireo mpifaninana lehibe) satria io no misy ny mpijery sy ny vola.
Mbola miaraka amiko ve?
Hifindra amin’ny lanjan’ny singa # 2: Целева насочена izao isika
Mba hahazoana vola mendrika ao amin’ny blôginao dia tsy maintsy misintona Fiveamoivoizana azo itokisana ianao.
Ny fahazoana mpihaino maromaro (ary manompo amin’ny filaminana tiany) dia ny fanalahidin’ny fahombiazan’ny aterineto.
Ny fitohanan’ny fiveamoivoizan’ny blôginao dia ny vola bebe kokoa azonao atao.
Kitapom-pahefana tsotra izany – Aleo lazaina fa ianao dia mitantana bilaogy DIY sy mivarotra zavakanto. Ny tahan’ny fanodinana ny blôginao dia 3% ary ny sandan’ny fanovana dia $ 25. Amin’ny ankapobeny, ho an’ny mpitsidika rehetra 100 ianao dia hanao ny fivarotana 3 ary manao $ 75. Raha miakatra amin’ny 200 ny isan’ireo mpitsidika manana lasibatra, avy eo ny teorika dia hisy fivarotana enina ary $ 150 mahasoa ny lalana.
Ny fomba mahomby indrindra hampiroboroboana ny blôginao
Alohan’ny handinihantsika ny paikady sy paikady manokana momba ny fiveamoivoizana dia andao hiresaka momba ny paikady ankapobeny.
Ny fomba mahomby indrindra amin’ny fampiroboroboana bilaogy dia ny mifantoka amin’ny zavatra efa miasa ho an’ny blôginao.
Mba hanaovana izany dia mila:
Mifangaro hatrany ny angona azo avy amin’ny blôginao
Ampio vola sy ezaka bebe kokoa amin’ny tetika
Марина от ангона
Fantatsika fa zava-dehibe ho an’ny fitomboan’ny blôginao ny angona.
Raha toa ianao ka tsy mampiasa ny tranonkala havanana mba handinihana ny fandrosoana sy ny fandikana tsara ny tranokalanao, dia mety haka dingana roa ianao raha tokony ho dingana iray.
Miankina amin’ny toetran’ny sainao sy ny fahaiza-misaina, azonao atao ny mijery ny karazana statistika samihafa.
Jereo aloha, Google Analytics ny tatitra dia mety ho mahery vaika. Maro ny isa! Ary mety tsy ho fantatrao ny sasany amin’ireo metika na hevitra.
Saingy, ny marina dia ny marina:
Ny tarehimarika / hevitra dia tsy sarotra, ary
Eo am-pahatsoram-po dia tsy mieritreritra aho fa tokony handany andro be loatra ny mpamaham-bolongana amin’ny fametahana tatitra Google Analytic.
Цонтра на Мандехана. Ny tanjonao dia ny hanangana blôgy tsara kokoa ho an’ny mpampiasa anao, fa tsy mandany ora maro aorian’ny ora fianarana ny teknika ao ambadiky ny Google Analytic.
Ireto ny nomerao efatra amin’ny Google Analytics:
Сесии / Придобити потребители
Sampan-draharahan’ny Fiveamoivoizana / сезиране
Саланитра isaky ny pejy
Nodinihako tamin’ny an-tsipiriany ireo metrika ireo ny fitarihana ny fitarihana bilaogy Andeha àry isika hirotsaka amin’izany.
Eritrereto hoe manana ny angona ianao ankehitriny … inona no ataonao?
Eny, mandatsaka ezaka bebe kokoa sy vola amin’ny tetika izay miasa ianao.
Ohatra tena misy eo amin’ny fiainana
Google Analytics (Придобиване)> Ny Fiveamoivoizana> Лохарано / Фампапалалана)
(Mba hahitana ity nomerao ity dia midira ao amin’ny Табло за управление на Google Analytics> Fitondràna> Съдържание на сайта> Всички страници.)
Araka ny hitanao – Ny mpampiasa dia mandany fotoana bebe kokoa amin’ny sasany amin’ireo pejy ireo (isa ambany) raha oharina amin’ny habaka amin’ny habaka.
Ny fotoana lava kokoa ao amin’ny pejy dia midika moe:
Ireo mpampiasa dia mitady ny votoatiny / fitaovana ilaina
Habe kokoa noho ny fandraisana anjara amin’ny media sosialy
Habezotra bebe kokoa amin’ny fanatsarana kokoa amin’ny Google (tahaka ny fiantraikan’ny tranonkala eo amin’ny sehatra Google ny vokatra Google)
Mifototra amin’io angon-drakitra io aho izao, manana pejy maromaro manome ny tahan’ny faharetana tsara indrindra.
Ireo fanontaniana nanontaniako tena tamin’ity toe-javatra ity:
Hevitra inona no toa be mpitia indrindra amin’ireo mpampiasa ahy?
Afaka ampidiriko bebe kokoa amin’ny lahatsoratra ve aho?
Afaka mahazo olona ve aho ho tafatafa ho an’ny vahiny ary hampian-danja kokoa ny lahatsoratro?
Misy vaovao vaovao ve azoko ampiana amin’ilay lahatsoratra?
Tokony hanao lahatsary avy amin’ireto votoaty ireto ve aho?
Ny fanalahidy dia ny mifantoka amin’ireo mpandresy sy manao izay tsara indrindra amin’izy ireo.
Ny fanaovana izany dia mety tsy hanome vahaolana haingana anao amin’ny fiveamoivoizana blôgy. Saingy raha io lanezy io – lehibe lavitra noho ny tetika maro.
Ankehitriny efa vita miaraka amin’ny paikadera amin’ny ankapobeny isika, fotoana izao mba hikarohana ireo paikady fitaterana bilaogy manokana.
1. Публикуване на гости
Na inona na inona ny fomba famakian’i Google ny fomba amam-pivahinan’ny vahiny – io paikady io dia miasa. Ny fanoratana lahatsoratra amin’ny hatsaran’ny mpitsidika amin’ny bilaogin’olon-tsotra fotsiny no fomba mahomby indrindra hanatratrarana ireo mpihaino kinendry ary hananganana mpamaky bilaogy
Raha toa ianao ka vaovao amin’ny fandefasana hafatra, dia nanoratra antsipiriany i Lori Ahoana ny fomba fitaterana mailaka an-tariby tany aloha, mandehana mijery.
Ny fanalahidin’ny fahombiazana, raha ny fahitako azy, dia ny mahita ireo bilaogy tsara – ireo izay manana mpamaky marina sy mpanaraka ny media sosialy. Azonao ampiasaina Topsy или Buzz Sumo ny mahita ireo bilaogy malaza sy ny mpikatroka ao amin’ny orinasanao. Na, afaka mandinika akaiky ny faritra fanehoan-kevitra ianao raha te hahalala raha mifanerasera amin’ireo bilaogera ireo mpamaky. Aza hadino hatrany fa mitoraka blaogy ho an’ny mpamaky tena ianao (noho izany dia zava-dehibe ny kalitao atiny). Aza hadino ny mandefa bilaogy manana Google PR Avo lenta fa ny mpamaky tsy misy fiasa – tsi mandeha amin’ny 2015 intsony ity fanao ity.
Biraon’ny Crowdsourcing amin’ny valiny tsara.
20 toro-hevitra ara-tsosialy media sosialy avy amin’ny manam-pahaizana
Manontany ny manam-pahaizana 30 mba hahazoana mpanaraka bebe kokoa Twitter
Ny fitaovana SEO tsara indrindra natolotry ny manam-pahaizana momba ny indostria
3. Adiresy Facebook
Ny Facebook dia fomba mandaitra (sarotra ny $ 0,06 / tranonkala hidirana amin’ny indostria sasany) mba hanintonana mpitsidika vaovao. Ny ampahany sarotra amin’ny dokam-barotra Facebook dia ny hoe mila mandinika be loatra ianao (adiresy an-tserasera, firenena samihafa, tombontsoa samihafa, sns) mba hahombiazana.
Mamorona drafitra. Hanampy anao handamina ny hevitrao rehefa manoratra ianao.
Atsaharo ny fotoana isan’andro hanoratana. Aza olona manomboka manao ebook ary tsy mamita azy mihitsy. Sakano ora iray isan’andro, roa ora, 15 minitra – tsy olana na firy na firy. Soraty fotsiny io.
Alefaso amin’ny modely ebook tsara izany. Ireto misy vitsivitsy avy amin’i HubSpot.
Покритие на Manamboara (т.е. Canva) на mandoa an-tserasera iray hanao izany (mpamorona iray tsy miankina ~ $ 26 / ora averina araka ny fijeriko ny fandaniana)
Photoshop ny fonosanao amin’ny sary ebook 3D. Pat Flynn dia nanambatra ny lahatsary lehibe momba ny fomba hanaovana izany.
Vita ianao! ankehitriny mampiroborobo izany amin’ny votoatin’ny fonao.
Fanomezana # 2: Mampirisika ny vokatra avy amin’ny orinasa amin’ny sehatra samihafa
Raha efa eo ianao no miresaka ary Manolotra vokatra sy serivisy ho an’ny mpihaino anao, maninona raha manangom-bola amin’ny olona lazainao?
Tsy maninona na dia ny mpamaky izany aza, ary mahazo komisiona ianao isaky ny misy mividy ny vokatra.
Партньорски маркетинг dia mety ho loharanom-bola lehibe ho an’ny asa fanampiny fanampiny. Jereo ireto hevitra ireto mba hampidirana ny varotra afrikana amin’ny fidiranao:
1 – Hitanao ny fahafaha-misafidy ao amin’ny votoatinao ankehitriny
Alefaso aloha ireo lahatsoratra efa navoakany sy tadiavo ireo vokatra na serivisy voalazanao. Raha vao hitanao izy ireo, mandehana fotsiny any amin’ny tranokala tsirairay ary mitadiava pejy "Съдружници".
Avy eo dia araho ny torolalana mba ho lasa mpiara-miasa. Raha vao tonga iray ianao, dia matetika ianao dia mahazo ID iray mitazona ny adiresy ao amin’ny faran’ny URL.
Rehefa mitsidika ilay URL адрес miaraka amin’ny ID ny mpitsidika iray ary mividy ny vokatra dia hahazo vola ianao.
2 – Mahita ireo fahafaha-manao amin’ny vokatra / asa ampiasainao
Ataovy lisitra ny vokatra sy ny serivisy ampiasainao. Mampiasa rindrambaiko an-tserasera maro aho izay mifandray amin’ny orinasako. Mety ho tombontsoa lehibe ho an’ny fidiram-bola izany.
Mandehana any amin’ny tranokalan’ny vokatra tsirairay ary jereo raha manana pejy mifandray izy ireo. Raha manao izany izy ireo, misoratra anarana amin’ny programa.
Koa satria mbola tsi manana afa-po ho an’ireto ianao dia mila manangana sasany.
Не е толокевитро:
Asehoy ny fomba ampiasanao ny vokatra na ny serivisy. Manampy amin’ny fanamafisana ny asanao ve izany? Manampy anao amin’ny SEO ve izany? Manampy anao hanatratra ireo mpitoraka blaogy manan-danja ve izany?
Mamorona torolàlana momba ny lahatsoratry ny bilaogy izay mampianatra ny mpihaino anao ny fomba hahatratrarana vokatra mitovy amin’izany amin’ny vokatra na serivisy.
Ampifandraiso amin’ny vokatra na serivisy ary ampio ny ID fanamarinanao manokana.
Amporisiho ity lahatsoratra ity ho an’ny mpihaino, ao amin’ny media sosialy, ary ny atody anaty aterineto feno olona mety haniry ny vokatra mitovy amin’izany.
Mampianatra fampahalalana mahasoa olona ianao ary mahazo vola.
3 – Mahita ny fahafaha-manao amin’ny vokatra / tolotra tianao ampiasaina
Te-hampiasa vokatra iray ianao fa tsy afaka manome izany? Ahoana raha azonao atao ny mamerina ny volanao ao anatin’ny fotoana fohy?
Raha manana programa afrikana ny vokatra, dia mety tena izy izany.
Voalohany, ataovy lisitry ny vokatra / tolotra tianao hampiasaina. Avy eo dia mandehana any amin’ny vohikalany ary jereo raha manana programa afilialy ry zareo.
Raha manao izany izy ireo, mividiana ny vokatra ary midira an-tsoratra. Avy eo dia ampiasao izany, mamoròna fehezanteny / fampianarana, ary mampivoatra ny lahatsoratra ho an’ny mpihaino anao tahaka ny nataonao teo aloha.
Ireo lahatsoratra ireo dia afaka mijanona ho mavitrika mandritra ny fotoana lava, ka mitondra fidiram-bola ho an’ny fiainan’ny lahatsoratra tsirairay.
4- Mampirisika ny vokatra avy amin’ny fikambanana amin’ny mailaka autoresponder
Ny mailaka dia fitaovana маркетинг маркетинг mahery. Iray amin’ireo fantsona vitsivitsy arahin’ny olona isan’andro izy io vonona ny hivarotra.
Ny mailaka autoresponder dia fanodinana maimaim-poana amin’ny mailaka izay alefa amin’ny olona rehefa misoratra anarana amin’ny lisitry ny mailakao.
Ireto ny tolotra roa tiako indrindra:
Izy roa ireo dia mamela anao hanangana mpitandro filaminana.
Tahaka ny fampiroboroboana vokatra avy amin’ny orinasan-tserasera ao amin’ny blôginao, ny fampiroboroboana ireo vokatra ireo amin’ny mailaka autoresponder dia afaka mamokatra fidiram-bola ho anao.
Azonao atao ny mampiroborobo mivantana azy ireo amin’ny mailaka na mamorona torolalana lahatsoratra bilaogy ary hampiroborobo ireo. Na izany na tsy izany, dia afaka mahazo vola any.
Ity no soso-kevitrao amin’ny autoresponder anao:
Atombohy amin’ny alàlan’ny mailaka vitsivitsy voalohany misy atiny mahasoa izay tsy mivarotra na inona na inona. Hanampy anao amin’ny fametrahana ny fitokisana amin’ireo mpanjifa vaovao.
Mipetraha amin’ny fifandraisana fananganana mailaka, играчка ny fangatahana ireo mpandray anao raha afaka manampy azy ireo amin’ny zavatra ianao. Hanorina fitokisana koa izany ary hampihenana ny anaran’ny soratra.
Rehefa mampiroborobo ny vokatra dia mifantoha amin’ny valiny azony azony fa tsy ilay vokatra fotsiny. Raha mahazo valiny ianao amin’ny fampiasana azy, dia ho azonao antoka fa hazavainao amin’ny an-tsipiriany ireo. Ity no hanao ny varotra ho anao.
Идея № 3: Маномана бирао ирай
Tafiditra ao amin’ny birao работа ny mpiasa mitady mpiasa. Afaka manolotra sehatr’asa feno amin’ny fotoana feno izy ireo, amin’ny fotoana sasany, na amin’ny fifanarahana.
Ohatra, Joba Mifanaraka amin’ireo mpitoraka bilaogy miaraka amin’ny orinasa miezaka manakarama olona hamorona votoaty ho azy ireo.
Raha manana fahefana eo amin’ny toerana misy anao ianao ary afaka mifanandrify amin’ireo mpikaroka momba ny asa dia afaka mandray birao miasa ary mahazo vola isaky ny te-hametraka asa fanokafana asa ny mpampiasa iray.
Azonao atao ihany koa ny mandefa ireo mitady asa any amin’ny birao.
TL; DR / Mandrosoa
Raha toa ka azonao atao ihany ny maka ireo hevi-dehibe telo ao amin’ity lahatsoratra ity:
Ени, afaka mamelona amin’ny alàlan’ny fitoraham-blaogy ianao. Ny sasany amin’ireo mpitoraka bilaogy amony dia mahazo olona akaiky enina eo ho eo isam-bolana.
Ny fomba tsara indrindra handrafetana ny blôginao: Реклама, Партньорски маркетинг, fivarotana vokatra sy serivisy.
Tena zava-dehibe ny kalitaon’ny votoatin’ny blôginao. Fa mba hanombohana ny vola, ny bilaoginao koa dia mila ao anaty orinasa mahasoa ary mahazo Fiveamoivoizana azo trandrahina.
Nifampizarako mihoatra ny antsasak’ireo tenimiafiko manokana ny tetikady, toro-hevitra ary hevitra ao amin’ity lahatsoratra ity. Tena ho faly sy faly aho raha manentana ny sasany aminareo handray ny dingana manaraka ary manomboka mametraka ny blôginao amin’ny alalan’ireo paikady voalaza etsy amony.
Ity misy fampahatsiahivana farany alohan’ny hamaranako ity lahatsoratra ity: Avy ny hetsika.
Maro ireo tonga nanatona ahy tamin’ny lasa izay nanana loharano ampy (fahaiza-manao, fahalalana, fotoana) hanombohana bilaogy sy vola. Saingy tsy nahomby izy ireo – satria mbola nanana fialantsiny ihany koa izy ireo hanemotra ny tetikasany ary hiandry ny kintana hifanaraka.
Afaka manoro anao fotsiny aho arry manala vato misakana vitsivitsy eny an-dalana. Mba hahombiazanao, dia mila mandeha eny an-dalana ianao.
Contents0.1 "Hey Jerry, heç bir əhval-ruhiyyə yoxdur?"0.2 Raha mikaroka ‘manao fitoraham-uşaq amin’ny banky’ ao
Contents0.1 "嘿，杰瑞，你好，我不开心?"0.2 Raha mikaroka’manao fitoraham-bola amin’ny banky’ao amin’ny Google ianao，iray amin’ireo valim-pikarohana soso-kevitra atolotr’i
Contents0.1 "Hej Jerry, ahoana no ahafahako manao bolongana lodër ny anao?"0.2 Raha mikaroka ‘manao
Contents0.1 "Hej Jerry, ahoana no ahafahako manao bolongana legetøj ny anao?"0.2 Raha mikaroka ‘manao
Contents0.1 "Hey Jerry, ahoana no ahafahako manao bolongana speelding ny anao?"0.2 Raha mikaroka ‘manao
Contents0.1 "مرحبًا جيري ، ahoana no ahafahako manao bolongana toy ny anao?"0.2 Raha mikaroka
0.1 "Hej Jerry, ahoana no ahafahako manao bolongana lodër ny anao?"
0.2 Raha mikaroka ‘manao fitoraham-bola amin’ny banky’ ao amin’ny Google Google, iray amin’ireo valim-pikarohana soso-kevitra atolotr’i Google dia "azonao atao tsara ny mitoraka blaogy". Mampiseho izany fa misy mpikaroka maro tsy ahitam-bokatsoa izay tsy mahalala hoe firy no azonao atao amin’ny bolongana – satria ny soso-kevitr’i Google dia mifototra amin’ny habetsaky ny fehezanteny fototra. Ka ohatrinona no azonao amin’ny alàlan’ny fanaovana bilaogy? Tani, ju keni fanontaniana, anda hojerentsika ny Internet. Lindsay sy Bjork avy ao Pinch of Yum dia nanao 85,000 $ mihoatra n $ 2016 2016 tamin’ny volat miditra (nijanona tsy nizara tarehimarika marina izy ireo taorian’izay). Pat Flynn avy amin’ny Smart E ardhura pasive Diar nahazo 160,000 $ tamin’ny Desambra 2017. Matthew Woodward dia nanao $ 25,000 mihoatra n $ 2017 $ tamin’ny volana Desambra. Ny karazana fidiram-bola azoko avy amin’ireto tatitra momba ny fidiram-bola ireto dia: Azo atao izany! Ny mpitoraka blaogy dia manao vola amin’ny Internet, ary Amin’ny hevitra sy paikady mety, tsy misy fetrany ara-bakiteny ny habetsahanao azonao atao ao anaty aterineto. Ity dia mitondra çdo fanatizë amarore manaraka … Ahoana no ahazoan’ny mpamaham-bolongana vola? Misy fomba tsy misy fiafaràna mba hahazoana vola avy amin’ny blôginao. Reklamimi i banderolave. Affiliates mivarotra. Mamorona sy mivarotra ny vokatrao manokana. Famerenana fanatsarana. Inona no safary tsara indrindra? Arakaraky ny maha-indostrianao anao sy ny toerana misy ny blôginao dia hisy fomba tsara kokoa handraisana ny blôginao. BELTELA BELTONY Avy amin’ny Authority Hacker dia nanadihady ny fomba fitadiavan’ireo bilaogera 23 amin’ny famahanam-bolongana ary namintina izany Ny fivarotana ny vokatrao manokana dia, amin’ny ankapobeny, tena mahasoa indrindra (jereotsy tabyo). Modeli i BiznesitTrajtura totale volumëFandaniana tanterakaProfitProjtjaProfit Sherbime $ 21.508 $ 2805 $ 18.703 666% Shitja e reklamave $ 235.977 135 dollarë, 041 100 dollarë, 936 74% Marketingu i Filialit $ 214.232 $ 47.664 $ 166.568 349% Ny vokatra mivarotra $ 434.004 $ 113.767 $ 320.237 281% Ny saram-pitsaboana matetika dia sarotra ny mivarotra ary noho izany dia miteraka latsaky ny fidiram-bola ny varri azo antoka. Maro amin’ireo mpitoraka blaogy ambony no manao bilaogy mivantana sy mivarotra. Ny varotra an-tserasera dia mamokatra vola be (2nd best), fa noho ny mpivarotra adiresy hamokatra votoaty marobe ary indraindray mahazo ny fifamoivoizana, dia mihena haingana ny marika. Affiliary ara-barotra no tena tetikasam-pihariana mahomby indrindra, izay mahatonga azy ho tsara ho an’ny mpamaham-bolongana vaovao izay mila manangom-bola haingana. Ity tranonkala ity dia natokana ho an’ny fidiram-bola avy amin’ny fiarahamonim-pirenena – ary nahavita nitombo avy amin’ny bilaogy iray-olona iray izahay ho an’ny ekipan’ny tonian-dahatsoratra iray, aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, mpivarotra media sosialy roa. Ny fivarotana vokatra ho an’ny vokatra dia mamokatra ny vola miditra indrindra amin’ny marika tombontsoa lehibe. Ny marika dia kely ambany noho ny fivarotana tokotany noho ny vidiny mifandraika amin’ny serivisy mpanjifa, ny fanodinana fandoavam-bola, sns., Fa ny tahan’ny fivoarana evitoj lenta dia manome izany ho an’ny # 1 bohom ho an’ny mpitoraka blaogy. Hanomboka Raha mamak mandra-pahatongan’ity dia mbola tsy manana bilaogy ianao… dia tsy maintsy misitrika loha ianao izao. Fa maninona no tomb nanomboka teo aloha ianao? Eny ary, mbola tsy rara nitsambikina tao. Ity ny ahy dingana iray amin’ny dingana vita amin’ny fomba hamoronana blaogy eto. Vakio ity ary aloha ary miverena amin’ity torolalana manaraka ity. Hiandry aho! Mirë! Koa ankehitriny dia vonona ny blôginao ary isika rehetra dia napetraka ho an’ny volamena … Ahoana no ahafahanao manao bilaogy vola, ho an’ny tena?
1 Tombanana tsara
2.1 Fomba # 1: Manaraha n vola
2.2 Motorë kërkimi
2.4 Kryqëzimi i komisionit
2.7 Inona nuk ka të dhëna të gabuara keqdashëse?
2.9 Fanapahan-kevitra: Vitsy kely na lehibe?
3 Trafiku i synuar
3.2 1. Postimi i mysafirëve
3.3 3. Facebook adiresy
3.5 Ideja # 3: Manomàna birao iray
4.1 Veprim Makà!
"Hej Jerry, ahoana no ahafahako manao bolongana lodër ny anao?"
Tena maniry ny hanampy ireo izay fantatro aho. Saingy, izito dia afaka mizara betsaka lodër izany na mandritra ny fivoriana ataon’ny olona na Whatsapp na Facebook Messenger.
Noh izany, manoratra ity lahatsoratra ity aho mba hizara lesona nianarako ho lodër ny mpamaham-bolongana nandritra n ta taona 15 farany.
Raha mikaroka ‘manao fitoraham-bola amin’ny banky’ ao amin’ny Google Google, iray amin’ireo valim-pikarohana soso-kevitra atolotr’i Google dia "azonao atao tsara ny mitoraka blaogy".
Ka ohatrinona no azonao amin’ny alàlan’ny fanaovana bilaogy? Tani, ju keni fanontaniana, anda hojerentsika ny Internet.
Lindsay sy Bjork avy ao Pinch of Yum dia nanao 85,000 $ mihoatra n $ 2016 2016 tamin’ny volat miditra (nijanona tsy nizara tarehimarika marina izy ireo taorian’izay).
Pat Flynn avy amin’ny Smart E ardhura pasive Diar nahazo 160,000 $ tamin’ny Desambra 2017.
Matthew Woodward dia nanao $ 25,000 mihoatra n $ 2017 $ tamin’ny volana Desambra.
Azo atao izany! Ny mpitoraka blaogy dia manao vola amin’ny Internet, ary
Ity dia mitondra çdo fanatizë amarore manaraka …
Reklamimi i banderolave. Affiliates mivarotra. Mamorona sy mivarotra ny vokatrao manokana. Famerenana fanatsarana.
Inona no safary tsara indrindra?
BELTELA BELTONY Avy amin’ny Authority Hacker dia nanadihady ny fomba fitadiavan’ireo bilaogera 23 amin’ny famahanam-bolongana ary namintina izany Ny fivarotana ny vokatrao manokana dia, amin’ny ankapobeny, tena mahasoa indrindra (jereotsy tabyo).
Modeli i BiznesitTrajtura totale volumëFandaniana tanterakaProfitProjtjaProfit
Sherbime $ 21.508 $ 2805 $ 18.703 666%
Shitja e reklamave $ 235.977 135 dollarë, 041 100 dollarë, 936 74%
Marketingu i Filialit $ 214.232 $ 47.664 $ 166.568 349%
Ny vokatra mivarotra $ 434.004 $ 113.767 $ 320.237 281%
Ny saram-pitsaboana matetika dia sarotra ny mivarotra ary noho izany dia miteraka latsaky ny fidiram-bola ny varri azo antoka. Maro amin’ireo mpitoraka blaogy ambony no manao bilaogy mivantana sy mivarotra.
Ny varotra an-tserasera dia mamokatra vola be (2nd best), fa noho ny mpivarotra adiresy hamokatra votoaty marobe ary indraindray mahazo ny fifamoivoizana, dia mihena haingana ny marika.
Affiliary ara-barotra no tena tetikasam-pihariana mahomby indrindra, izay mahatonga azy ho tsara ho an’ny mpamaham-bolongana vaovao izay mila manangom-bola haingana. Ity tranonkala ity dia natokana ho an’ny fidiram-bola avy amin’ny fiarahamonim-pirenena – ary nahavita nitombo avy amin’ny bilaogy iray-olona iray izahay ho an’ny ekipan’ny tonian-dahatsoratra iray, aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, mpivarotra media sosialy roa.
Ny fivarotana vokatra ho an’ny vokatra dia mamokatra ny vola miditra indrindra amin’ny marika tombontsoa lehibe. Ny marika dia kely ambany noho ny fivarotana tokotany noho ny vidiny mifandraika amin’ny serivisy mpanjifa, ny fanodinana fandoavam-bola, sns., Fa ny tahan’ny fivoarana evitoj lenta dia manome izany ho an’ny # 1 bohom ho an’ny mpitoraka blaogy.
Raha mamak mandra-pahatongan’ity dia mbola tsy manana bilaogy ianao… dia tsy maintsy misitrika loha ianao izao.
Fa maninona no tomb nanomboka teo aloha ianao?
Eny ary, mbola tsy rara nitsambikina tao.
Mirë! Koa ankehitriny dia vonona ny blôginao ary isika rehetra dia napetraka ho an’ny volamena …
"Manaova ny votoatiny tsara; ny vola sy ny fifamoivoizana dia hanaraka, "hoy ilay manam-pahaizana.
Tsy tena marina izany – farafaharatsiny tsy avy amin’ny zava-niainako.
Ny votoatiny dia 50% ny lalao, raha kely indrindra.
Eny, amin’ny maha mpamaham-bolongana azy, adidinay ny mamorona votoaty mba hitazonana ireo mpamaky anay.
Fa mba hahazoana vola amin’ny farany, tokoni hanana singa manan-danja roa hafa ianao – tondra-drivotra azo antoka sy tratran’ny tranonkala.
Raha vao nanomboka ny asako tamin’ny maha-mpivarotra Internet ahy aho, dia nanao tranokalam-pikambanana iray aho mba hivarotra sambo marefo. Azonareo an-Tsaina ve hoe zjarr ny olona mividy sambo marefo aty anaty aterineto?
Ny ratsy indrindra, ity vokatra ity dia vokatra ara-tsakafo ary mivarotra ihany mandritra ny fahavaratra, noho izany dia mbola voafetra ihany aho tamin’ny fivarotako. Ny habaka dia tsy mihoatra ny varotra roa isan-taona. Tsy voatery ny fotoanako hanorenana an’io tranonkala io.
Ny lesona amin’ity: Na inona na inona ny fanoratana tsara ny votoatinao na ny hatsaranao ny endrikao ny bilaoginao – raha tsy manapa-tsakafo mahasoa anao ianao, dia tsy ho afaka hampiova ny ezaka vitanao amin’ny vola.
Fomba # 1: Manaraha n vola
Nahoana no mitranga ndonjë amin’ny banky ny tranga lodër izany? Satria izany no vola.
Manaova fikarohana mifandraika amin’ny nichanao Google ose Bing. Misy dokam-barotra ve ao amin’ny pejin’ny valin’ny fikarohana?
Ohatra: Ny valin’ny fikarohana ao Bing amin’ny floristan’i Londres.
Përgjigje: Valin’ny fikarohana Google ho an’ny latabatra kesik hazo.
Ndihmë për Google ose Planet Fjalë kyçe të Planet Manoritsoritra ny vidin’ny sainam-pirinty ho an’io fikarohana io ary maminavina hoe ohatrinona no azonao atao amin’ny Google Adsense klikoni *; ary noho izany, ohatrinona no azonao atao amin’ny fivarotana habaka adiresy.
Mariho fa tsy misy fitsipika mazava an tsoratra fa fanombantombanana be loatra, Google dia mando 30 – 50% ny vidin’ny klikan’ny AdSense Publishers.
Fomba iray hafa hamaritana hoe ohatrinona (ay ny tena zava-dehibe indrindra, raha) mandany ny dokam-barotra pay-per-click (PPC) Ny doka dia amin’ny SpyFu.
Kërko Falas Falas shkarkuar Pamje Eksitim Spyfu Kërko Falas. Ny tsirairay amin’ireo fikarohana ireo dia latsaka kely noho ny minitra 5 mba hamitana azy – ary azoko fantarina ny tombom-barotry ny niche amin’ny fandinihana ireo antontan-taratasy ireo. Misy tsipirian-javatra sarobidy kokoa raha toa ka mihoatra ny fikarohana malalaka isika saingy hifikitra amin’ny famoahana maimaim-poana amin’izao fotoana izao. Mba hanaovana ny fikarohana ataonao dia tsindrio fotsiny amin’ny mpifaninana anao (na ireo mpilalao lehibe ao amin’ny sainanao) amin’ny fikarohana.
Ny tena fiainana marina # 1 – 64,000 $ / muaj Adwords
Niche # 1 – vokatra malefaka, vahaolana raharahambarotra. Misy mihoatra ny orinasa hafa an’ny 10 izay manolotra fandaharam-pikambanana ao amin’ity orinasa ity. Spyfu nanombantombana and it mpivarotra ity dia mandany 64,000 dollarë më shumë Adwords isam-bolana.
Niche # 2 – 100,000 $ / muaj më parë Adwords
Niche # 2 – Fanatanjahantena ara-panatanjahantena – mieritrereta marika ara-panatanjahantena lodër Adyas, Nike, ary New Balance, fa amin’ny kely kokoa ary mifantoka amin’ny karazana fanatanjahantena. Ity orinasa ity dia mandany mihoatra ny 100,000 $ isam-bolana amin’ny tenifototra maherin’ny 57,000 araka ny Spyfu.
Niche # 3 – 60,000 $ / muaj më parë Adwords
Ny Niche # 3 – mpamatsy solosaina IT – tsena iraisam-pirenena, ny ankamaroan’ny olona izay mitaky tranonkala dia mila izany. Misy 10 – 15 mpilalao lehibe hafa amin’ity sehatra ity. Ity orinasam-pandraharahana ity dia manolotra ny tenimiafina 3,846 ao amin’ny Google ary mandany n $ 60,000 isam-bolana.
Niche # 4 – 9,500 $ / muaj më parë Adwords
Niche Nr. 4 – Mpanome tolotra tranonkala. Ity orinasa ity dia iray amin’ireo fanombohana mahazatra vitsivitsy taona vitsy lasa izay. (Gaga aho mahita azy ireo mandany efa ho $ 10,000 islam-bolana amin’ny adwords).
Niche # 5 – 71,500 $ / muaj më parë Adwords
Niche # 5 – Vokatra ara-bola manerantany. Ny sary nalaina dia ny fanadihadiana iray amin’ny iray amin’ireo mpilalao lehibe indrindra amin’ity sambo ity. Nanana tranonkala roa tao amin’ity oryasa ity aho niverina tao amin’ny 2000 – tsy ho gaga raha mahita orinasa mandany mihoatra ny 100,000 $ isam-bolana amin’ny adwords.
Niche 6 – 24,200 dollarë në muaj / AdWords
Niche # 6 – Mpanome tolotra tranonkala. Ity tranonkala ity dia tranonkala iray ary tsy mivarotra nok vokany manokana. Ny tompon’ny tranokala dia mandany vola mihoatra ny 20,000 $ isam-bolana amin’ny dokambarotra PPC.
Kryqëzimi i komisionit
Fomba iray hafa ampiasaiko matetika mba hitsaràna ny tombotsoan’ny niche iray dia mijery ireo isa ao Funksioni i Komisionit (CJ).
Moa ve ireny mpivarotra ireny mando ny vondrona misy azy?
Azonao ampiasaina ny vola harenina (barazy maitso) ho lodër ny mety ho endriky ny karama.
Fandanian’ny tambajotra = Manao ahoana ny habetsahan’ny mpividy raha oharina amin’ny ankapobeny. Hahazoana harena ambony kokoa = fidiram-bola bebe kokoa amin’ny program; Volan’ny 3 EPC = salanisa isaky ny klioba 100 = Ny tombony azo antoka dia ity programa afiliana ity amin’ny fotoana maharitra; 7 andro EPC = viteisa isaky ny klioba 100 = ity vokatra ity?
Ny haino aman-jery sosialy lehibe indrindra eran’izao tontolo izao dia tena fitaovana lehibe hahafahanao manazava ny vaika vaovao azonao. Fantaro bebe kokoa momba ny mpihaino kendrena anao, ampio ny mpifaninana aminao, tadiavo ny zoro iray hamehezana ny nique anao, sy ny sisa.
Raha efa manana ianao Facebook Page (Afrika mamorona iray ianao alohan’ny hanombohana blôgy, afaka maimaim-poana), ny toerana voalohany hijerena ny fanorenanao. Alefaso any amin’ny sasany amin’ireo fanatanjahan’ireo mpankafy ireo ary tandremo ny demografika (lahy / vavy, toerana, manambady / tokana / nisara-panambadiana, taona, sns) ary ny tombontsoany.
Grupi Mifandraisa am-piangonana në Facebook – Shfrytëzues i ri dhe reklamues ny mpampiasa mba hahatakatra dhe olana sy e filani.
Ho an’ireo izay manana pejy Facebook dia mandehana ao amin’ny Insights> Përmbledhje> Pejy ho Watch. Ity no hitanao ary ampitahao ireo pejy mitovy soso-kevitry Facebook. Azonao atao tsindriana amin’ny rohy tsirairay mba hahitanao ireo lahatsoratra malaza nivoaka tao amin’ireo pejy ireo.
Ireto mjeron soso-kevitra sasantsasany:
Hamafiso amin’ny lahasa iray vaovao amin’ny fijerena ireo hetsika mpilalao hafa – Izany no nahitako ny karazan-tsindrim-borona rehefa nandalina n bilaogy CSS / jQuery / HTML5 aho.
Fantaro ny mpihaino anao – Aiza izy ireo no mandana fotoana? Inona ny olana mahazo azy ireo? Afaka manome vahaolana ve ianao?
Jereo hoe nahaana ny olona no mividy amin’ny mpifaninana aminao – Afaka manome zavatra mitovy ve ianao ary manangom-bola?
Jereo hoe nahaana n olona no tsy mividy amin’ny mpifaninana aminao – Manahirana loatra ve ny vokatrao? Angamba tsy manakarama izany marina izany. Afaka manao zavatra tsara kokoa ve ianao ary mahazo ny mpitsidika azy?
Manorata lohateny lehibe sy votoatim-baovao – Fantaro hoe iza amin’ireo lahatsoratra ao amin’ny Facebook no mahazo ny fidirana ambony indrindra, manorata lohateny lodër izao.
Na miandry … tsy izany ianao? Eny ary, tsy manenjika soavaly maty intsony aho Ity misy lisitra tsara ho an’ny mpandray anjara.
Ny lavaka lava vava amin’ny teny malemy (kredi: Alefaso any amin’ny Fox).
Fikfarë duhet të shikoni për çdo kërkesë të shpejtë për SEO. Ny tanjon’izy ireo, matetika kokoa noho ny tsy, dia ny mamantatra matetika ny teny fanalahidy notadiavina (ho fohy na lava lava) ary mametraka lalana ho an’ny fanentanana.
Inona nuk ka të dhëna të gabuara keqdashëse?
Saingy satria fantazia nk ankamaroan’ny mpividy mpividy – betsaka kokoa ny mampiasa io tahirin-teny fototra io. Miaraka amin’ny votoatin-teny manan-danja dia azontsika atao ihany koa ny mahatakatra ity manaraka ity kokoa (ary mety ho hita koa ny fahafaha-manao fandraharahana vaovao):
Fikarohana bebe kokoa = ambjoni fangatahana; Valiny misimisy kokoa no niverina tao amin’ny pejy valin’ny fikarohana = fanampiny.
Ohatra: Ho an’ny fakantsary – Nikon, Canon, Sony; ho an’ny mariazy – Bali, Maldive, Hawai; ho an’ny tranonkala – iPage, BlueHost, Hostgator; ho an’ny olo-malaza – Taylor Swift, Linkin Park, Bruno Mars.
Amin’ny ankapobeny, ny fividianana mividy dia խուսափ kokoa raha be ny karoka momba ny ‘famerenan’ny Widget’, ‘ny sarisary modely ary ny anarana’, ’10 marka më e mirë widget’, ‘widget mividy online’. Mifanohitra amin’izany, ny fikarohana momba ny ‘tantaram-pifandraisana’, ‘fitarainana widget’, na ‘ny fanaovana Widget’ dia mety hiova ho fifanakalozana ara-barotra.
Gjallëri e gjallë
Ny dokam-barotra mendrika kokoa amin’ny fikarohana fikarohana manokana, ny sandam-barotra ambony kokoa dia ho an’io fikarohana io.
Tamin’ny fotoana voalohany nanombohako, maro ireo webmaster (mariho – dia mbola niankina tamin’ny fitaovana iray antsoina hoe "uverturë") – izay ahafahanao mametraka fomba fikarohana tsotra fotsiny ny ‘mpitoraka blaogy’ ary ny rafitra dia hanome endrika sarotra anao indraindray io teny io dia mikaroka, maimaim-poana. Aminay dia ampitahao ireo isa ireo miaraka amin’ny habetsaky ny valim-pifidianana ary hitsara ny fifaninanana (ary ny profitabiliteti) amin’ny niche.
Ankehitriny fa tsy mysy intsony ny Overture dia sarotra ny mahazo ny angon-teny maimaimpoana azo antoka.
Nyjë Fjalë kyçe të Google Planifikues në lidhje me fitorenovare maotina vitsivitsy ampiasaiko amin’izao fotoana izao (raha azonao atao ny mandoa vola, manoro hevitra AHREFS ary Aza maimaika).
Ny sarimihetsika filma dia iray amin’ireo zanako indrindra. Tsy manangona azy ireo aho fa mankasitraka ny hatsaran’ny zavakanto sy ny fahatsiarovan-tena ao amin’izy ireo. Andeha hojerentsika raha afaka mampitodika ny fahalianako amin’ny hevitra bilaogy mahasoa izahay. Mariho fa tsy nanao fikarohana aho talohan’ny nanoratako ity torolàlana ity – ka dia mahaliana ahy lodër ny amin’izao fotoana izao.
Alefaso aloha ny Google Trends.
Raha mijery ny endrika, dia toa tsy mandeha amin’ny Internet intsony ny lohahevitra – izay tena lojika raha jerena ny fotoana lanin’ny olona ao amin’ny YouTube androany.
Rehefa mivoatra dia afaka mahita koa izahay fa ny ankamaroan’ny mpikaroka dia ndonjë Etazonia, Kenia, Inde, Aostralia, ary Kanada.
Mba hahatakarako tsara kokoa ny tabilao, matetika aho dia mampitaha ny fironana tsy fantatra amin’ny zavatra fantatro. Amin’ity ohatra ity dia nampidiriko ny teny hoe "fanamarinana hosting". Hitanao fa misy olona maro kokoa mitady "afisy sarimihetsika".
Planifikuesi i Fjalës kyçe të Google Planet
Avo eo, handeha ho çdo amin’ny Keyword Google Planifikues izahay mba hahazo hevitra bebe kokoa.
Tsindrio ao amin’ny "sarimihetsika" amin’ny sarimihetsika ary tsindrio "Merrni Ide".
Ny pejy voalohan’ny pejy (jereo eto ambany) dia mampiseho fa maro ireo karazana fikarohana amin’ny sarimihetsiketsa momba ny sarimihetsika (fandaharana 41,900 + isam-bolana), horonantsary sarimihetsika horonantsana (5) sarimihetsika sarimihetsika, sarimihetsika malaza (3,400 + fikarohana horonantsary), Hollywood afisy sarimihetsika (Fikarohana 1,600 + isam-bolana), sy ny sisa. Misy ihany koa ny fangatahana խուսափ lenta kokoa momba ny famoronana ny sarimihetsika fimailo (22,000 fik fikarohana).
Endri-tsoratra manan-danja amin’ny Planifikuesi kryesor i Google Maps.
Azontsika atao ve ny manamarika ny fividianana fikolokoloana amin’ireto karoka ireto (raha mivarotra mivantana ny sarimihetsika mivantana ny drafitra)? Azonao atao ihany koa ny lohahevitra ifanakalozan-kevitra.
Fehezanteny manan-danja ahitana ny "Bëni Posterin e Filmit" – ireo mpikaroka ireo no tena mitady ny lesona sy fitaovana fanontam-pirinty.
Miverina çdo Kërkim i Google
Ahoana raha tsy te hivarotra vokatra ara-batana isika? Fantatrao – tsy dia mahafinaritra loatra ny fanodinana logjistike. Afaka miblaogy sy mivarotra sehatra dokam-barotra fotsiny ve isika? Mba hamaliana ity fanontaniana ity dia andramo ny fikarohana sasantsasany ao amin’ny Google ary hijerena raha afaka mahita ny mpizarazara na ny programa afiliana isika.
Azonao atao ihany koa ny mijera akaiky ny dokam-barotra amin’ny dokam-barotra amin’ny dokambarotra – moa ve izy ireo mamorona dokam-barotra eny an-dalam-pikarohana? Raha eny, inona ni begogy? Afaka mivarotra mivantana mivantana amin’ireo mpivarotra ve ianao? Manome toky ny tombombaran’ity lohahevitra ity, dia afaka mampihatra ity data ity fanalahidy ity amin’ny Spyfu izahay mba hamaritana hoe fy ny mpizarazara no mandany.
Mba handinihana lalindalina kokoa, mety te-hibitsika amin’ny valin’ny fikarohana biolojika isika (tranokalan’ny rohy, ny fanatsaràna ny onjam-peo, ny haino aman-jery sosialy, sns.) Mba hahitana ny fahotot Përfundimtarisht në internet SEO.
Fanapahan-kevitra: Vitsy kely na lehibe?
SEO pananinanana Ny
Ankehitriny dia manana ny tsenan’ny tsena rehetra ilaina isika – fotoana hanapahan-kevitra. Tokoni hitsambikina ve isika? Tena tsara tokoa ve izany? Inona no mety ho fiantraikany amin’ny fanatonana izany? Havelako ho anao ny fanatsoahan-kevitra.
Maro amin’ireo manam-pahaizana no manoro hevitra vaovao mba hisorohana ny fifaninanana SEO tsy hivezivezy ary hisafidy karazan-tsarimihetsika kely kokoa rehefa misafidy nese niche.
Mino ny mifanohitra amin’izany aho. Tokony hanandrana ny dobo goavana ianao (teny filamatra eo amin’ny fikarohana miaraka amin’ny fangatahana evitoj lenta sy ireo mpifaninana lehibe) satria io no misy ny mpijery sy ny vola.
Trafiku i synuar
Hifindra amin’ny lanjan’ny singa # 2: Targeted Targeted Targeted izao isika
Mba hahazoana vola mendrika ao amin’ny blôginao dia tsy maintsy misintona fifamoivoizana azo itokisana ianao.
Ny fitohanan’ny fifamoivoizan’ny blôginao dia ny vola bebe kokoa azonao atao.
Kitapom-pahefana tsotra izany – Aleo lazaina fa ianao dia mitantana bilaogy DIY sy mivarotra zavakanto. Ny tahan’ny fanodinana ny blôginao dia 3% ay ny sandan’ny fanovana dia 25 $. Amin’ny ankapobeny, ho an’ny mpitsidika rehetra 100 ianao dia hanao ny fivarotana 3 ary manao $ 75. Raha miakatra amin’ny 200 ny isan’ireo mpitsidika manana lasibatra, avy eo ny teorika dia hisy fivarotana enina ary 150 $ mahasoa ny lalana.
Alohan’ny handinihantsika ny paikady sy paikady manokana momba ny fifamoivoizana dia andao hiresaka momba ny paikady ankapobeny.
Ny angona marina
Raha toa ianao ka tsy mampiasa ny tranonkala havanana mba handinihana ny fandrosoana sy ny fandikana tsara n tranokalanao, dia mety haka dingana roa ianao raha tokony ho dingana iray.
Jereo aloha, Google Analytics dhe teknikat e tua të meta ho mahery vaika. Maro ny isa! Ary mety tsy ho fantatrao ny sasany amin’ireo metika na hevitra.
Saingy, marina di ny marina:
Ny tarehimarika / hevitra dia tar sarotra, ary
Eo ampahatsoram-po dia tsy mieritreritra aho fa tokony handany andro be loatra ny mpamaham-bolongana amin’ny fametahana tatitra Google Analytic.
Mandehana tsotra. Ny tanjonao dia ny hanangana blôgy tsara kokoa ho an’ny mpampiasa anao, fa tsy mandany ora maro aorian’ny ora fianarana n teknika ao ambadiky ny Google Analytic.
Emri juaj nuk është në dispozicion për Google Analytics:
Sesione / Përdorues të Fituar
Referimi Sampan-draharahan’ny fifamoivoizana / referimi
Salanitra isaky ny pejy
Nodinihako tamin’ny an-tsipiriany ireo metrika ireo ny fitarihana n fitarihana bilaogy Andeha àry isika hirotsaka amin’izany.
Google Analytics (blerje)> Ny fifamoivoizana> Loharano / Fampahalalana)
(Shihni këtu për herë të parë këtë mesatare në Google Dashurin e Google Analytics)> Fitondràna> Përmbajtja e faqes> Të gjitha faqet.)
Ny fotoana lava kokoa ao amin’ny pejy dia midika hoe:
Bashkitra inona no toa be mpitia indrindra amin’ireo mpampiasa ahy?
Ny fanaovana izany dia mety tsy hanome vahaolana haingana anao amin’ny fifamoivoizana blôgy. Saingy raha io lanezy io – lehibe lavitra noho ny tetika maro.
1. Postimi i mysafirëve
Ny fanalahidin’ny fahombiazana, raha ny fahitako azy, dia ny mahita ireo bilaogy tsara – ireo izay manana mpamaky marina sy mpanaraka ny media sosialy. Azonao ampiasaina Topsy or Buzz Sumo ny mahita ireo bilaogy malaza sy ny mpikatroka ao amin’ny orinasanao. Na, afaka mandinika akaiky ny faritra fanehoan-kevitra ianao raha te hahalala raha mifanerasera amin’ireo bilaogera ireo mpamaky. Aza hadino hatrany fa mitoraka blaogy ho an’ny mpamaky tena ianao (noho izany dia zava-dehibe ny kalitao atiny). Aza hadino ny mandefa bilaogy manana Google PR evro.
Manontany ny manam-pahaizana 30 mbahet hahazoana mpanaraka bebe kokoa Twitter
3. Facebook adiresy
Ny Facebook dia fomba mandaitra (sarotra ny 0,06 $ / tranonkala hidirana amin’ny indostria sasany) mba hanintonana mpitsidika vaovao. Ny ampahany sarotra amin’ny dokam-barotra Facebook dia ny hoe mila mandinika be loatra ianao (adiresy an-tserasera, firenena samihafa, tombontsoa samihafa, sns) mbahet hahombiazana.
Atsaharo ny fotoana isan’andro hanoratana. Aza olona manomboka manao ebook ary tsy mamita azy mihitsy. Sakano ora iray isan’andro, roa ora, 15 minitra – tsy olana na e zjarrtë. Soraty fotsiny io.
Mbulesa Manamboara (d.m.th. Canva) në mando an-tserasera iray hanao izany (mpamorona iray tsy miankina 26 26 $ / ora averina araka ni fijeriko ny fandaniana)
Photoshop ny fonosanao amin’ny sary ebook 3D. Pat Flynn dia nanambatra nah lahatsary lehibe momba ny fomba hanaovana izany.
Marketingu i bashkëpunimit dia meto ho loharanom-bola lehibe ho an’ny asa fanatik fanampiny. Jereo ireto hevitra ireto mbahet hampidirana ny varotra afrikana amin’ny fidiranao:
Alefaso aloha ireo lahatsoratra efa navoakany sy tadiavo ireo vokatra na serivisy voalazanao. Raha vao hitanao izy ireo, mandehana fotsiny amin’ny tranokala tsirairay ary mitadiava pejy "Affiliates".
Rehefa mitsidika ilay URL miaraka amin’ny ID ny mpitsidika iray ary mividy ny vokatra dia hahazo vola ianao.
Mandehana çdo amin’ny tranokalan’ny vokatra tsirairay ary jereo raha manana pejy mifandray izy ireo. Raha manao izany izy ireo, misoratra anarana amin’ny programa.
Koa satria mbola tsy manana afa-po ho an’ireto ianao dia mila manangana sasany.
Ity no tolo-kevitro:
Asehoy ny fomba ampiasanao ny vokatra na serivisy. Manampy amin’ny fanamafisana n as asanao ve izany? Manampy anao amin’ny SEO a izany? Manampy anao hanatratra ireo mpitoraka blaogy manan-danja ve izany?
Voalohany, ataovy lisitry ny vokatra / tolotra tianao hampiasaina. Avy eo dia mandehana cdo amin’ny vohikalany ary jereo raha manana programa afilialy ry zareo.
Ireo lahatsoratra ireo dia afaka mijanona ho mavitrika mandritra n foto foto lava, ka mitondra fidiram-bola ho an’ny fiainan’ny lahatsoratra tsirairay.
Ny mailaka dia fitaovana marketing mahery. Iray amin’ireo fantsona vitsivitsy arahin’ny olona isan’andro izy io vonona ny hivarotra.
Azonao atao ny mampiroborobo mivantana azy ireo amin’ny mailaka na mamorona torolalana lahatsoratra bilaogy ary hampiroborobo ireo. Na izany na tsy izany, dia afaka mahazo vola ndonje.
Atombohy amin’ny alàlan’ny mailaka vitsivitsy voalohany misy atiny mahasoa izay tsy mivarotra na inona na inona. Hanampy anao amin’ny fametrahana n fitokisana amin’ireo mpanjifa vaovao.
Mipetraha amin’ny fifandraisana fananganana mailaka, lodër ny fangatahana ireo mpandray anao raha afaka manampy azy ireo amin’ny zavatra ianao. Hanorina fitokisana koa izany ary hampihenana ny anaran’ny soratra.
Ideja # 3: Manomàna birao iray
Tafiditra ao amin’ny birao pune ny mpiasa mitpi mpiasa. Afaka manolotra sehatr’asa feno amin’ny fotoana feno izy ireo, amin’ny fotoana sasany, na amin’ny fifanarahana.
Raha manana fahefana eo amin’ny toerana misy anao ianao ary afaka mifanandrify amin’ireo mpikaroka momba ny asa dia afaka mandray birao miasa ary mahazo vola isaky ny te-hametraka asa fanokafana asa ny mpampiasa.
Azonao atao ihany koa ny mandefa ireo mitady asa amin’ny birao.
Eny, afaka mamelona amin’ny alàlan’ny fitoraham-blaogy ianao. Ny sasany amin’ireo mpitoraka bilaogy ambony dia mahazo olona akaiky enina eo ho eo isam-bolana.
Ny fomba tsara indrindra handrafetana ny blôginao: Reklamimi, marketing i Filialit, serivisy fivarotana vokatra sy.
Tena zava-dehibe ny kalitaon’ny votoatin’ny blôginao. Fa mba hanombohana ny vola, ny bilaoginao koa dia mila ao anaty orinasa mahasoa ary mahazo fifamoivoizana azo trandrahina.
Nifampizarako mihoatra ny antsasak’ireo tenimiafiko manokana ny tetikady, toro-hevitra ary hevitra ao amin’ity lahatsoratra ity. Tena ho faly sy faly aho raha manentana ny sasany aminareo handray ny dingana manaraka ary manomboka mametraka ny blôginao amin’ny alalan’ireo paikady voalaza etsy ambony.
Afaka manoro anao fotsiny aho ary manala vato misakana vitsivitsy eny an-dalana. Mba hahombiazanao, dia mila mandeha eny an-dalana ianao.
Contents0.1 "Хей Джери, ахоана не ahafahako manao bolongana играчка ny anao?"0.2 Raha mikaroka ‘manao